Imveliso yeigloves zemidlalo yeTshayina kunye nabaxhasi | qiangjing
Iigloves zemidlalo zine imisebenzi ephambili: 1.Non-slip. Bambelela kwezi zixhobo ngelixa uziqhelanisa necala lokufunga kwezandla. Ukukhusela. Akukho zibizo zezandla, ngakumbi izandla zabasetyhini. 3. Ingqondo elungileyo. Thatha ubugcisa bemfazwe, unokuba nengqondo engcono xa unxiba iigloves. 4. Ukujonga kakuhle. Iigloves zomzimba ngoku ziyinto yokufikelela.
Ubungakanani: S, M, L okanye bunokwenziwa ngokwezifiso
Umbala: umbala omnyama okanye unokwenziwa uhlengahlengiswe
Ukusetyenziswa: abadala kunye nabantwana
Umda: ukuhambisa ubushushu, i-pvc lable.etc
I-OEM / ODM yamkele
Isixhobo: neoprene, nylon
Umsebenzi: ukunciphisa iintlungu zangasemva, ulungiso olungalunganga
Inkcazo emfutshane yemveliso:
Zininzi iigloves zokuzilolonga kwimarike, kwaye ukusebenzisa imizimba eyahlukeneyo yomzimba kufuneka usebenzise ngokwemvelo iigloves zomzimba ezahlukeneyo. Xa usenza umthambo wezixhobo eziphezulu, kufuneka usebenzise iigloves zokuqina zomzimba, njengokutyhala isoftware enzima, ukuba usebenzisa iigloves zomzimba eziqhelekileyo, ziya kunxitywa ngenyanga eyi-1. Ukuba usenza umthambo ongathathi ntweni njenge-dumbbells, kuya kufuneka ukhethe iigloves zomzimba onesikhumba kwisandla sakho, ilaphu elingasemva kwesandla, kunye nezihlahla ezixhonyiweyo. Ukuba ufuna ukwenza umdlalo, ubugcisa bemfazwe kunye neminye imidlalo, khetha nje iigloves ezinemibala eqaqambileyo, ephefumlayo.
Sebenzisa izinto ezinokuphefumla ukuze uphephe ubushushu obufumileyo beeglavu, umphezulu womphezulu uphefumla kakhulu kwaye ilaphu elinoluliweyo. Iindwangu ezolulwa ngezitebhisi zino-elasticity, density high. Ke ngoko, ukuxhathisa komoya kusetyenziswa ngokubanzi kwiigloves eziphambili kunye neigloves ezizodwa zenjongo. Isixhobo esingashenxiswanga esidityaniswe nomzimba ophambili sisetyenziswa ikakhulu kumanqindi wenqindi esandleni, kwaye ubukhulu becala senziwe ngezinto ezingahambelaniyo nemicrofRu.
Mthuthu: Inokhetho olufana neigloves zebhayisekile. Inokuguquguquka okuhle, ayithinteli ukusebenza, ilungele ubungakanani besandla, iigloves ezingavumiyo ukunxiba, okanye ikhethe iigloves ngombane wekhabhoni fungi ngasemva wesandla, ukuze ikhusele iZandla zakho.
Ukushushuluza: Yonke inkqubo yokushushuluza ixhomekeke kwizibonda zangaphantsi, ngenxa yoko iimfuno zeigloves ziphezulu kakhulu. Ayigcini ngokugcina ukufudumala nokubanda, kodwa nokuba nokuthamba, ukungathambisi kunye nokusika ubungqina. Iigloves ezisisiseko zenziwe ngesikhumba sendalo kunye nezinto zokwenziwa, kufuneka zikhethe amalaphu angenakungena. Xa ikhephu ligqabha ngengozi ezandleni zakho xa ushibilika, inyibilika ngokulula emanzini kwaye ingena kwiigloves, ngoko ke ilaphu langaphandle leigloves kufuneka lingabi manzi. Ngexesha lokushushuluza, izixhobo ze-ski kufuneka zihlengahlengiswe rhoqo, ke iigloves ze-ski kufuneka zibanzi kwaye kufuneka zahlukaniswe neminwe emihlanu ukuze isebenze ngokulula. Ukuba isihlahla seglavu sisebenza ixesha elide, kwaye i-cuff inokugutyungelwa, i-wrist ingasindiswa. Ukuba kukho i-band elastic band, inokuthintela ngokufanelekileyo ukungena kweqhwa. Kungcono ukuba neepads zecotton ukukhusela ukugcina ubushushu. Iibhodi zeqhwa zinokukhetha phakathi kweigloves zeminwe emihlanu kunye neigloves zeminwe emibini, kwaye ngoku iigloves zeminwe emithathu ziyathandwa nakubathengi. Ukuba kunokwenzeka, lungiselela isibini esongeziweyo, ukusebenza kwemvula akulungile, awunakho ukuzimela izandla zakho ziyafunga ziyakwenza ukuba iigloves zimanzi.
Ngaphandle: Kwimisebenzi yangaphandle, iiglavu ezixhasayo zangaphandle ziya kudlala indima ebalulekileyo ekuweleni kwe-esile endle kunye nemisebenzi yokukhwela. Ubusika obuzayo, kwiimozulu ezibandayo, ukufudumala kunye nokuthuthuzela kwezandla zibonisa ngokuthe ngqo ukuthuthuzelwa komzimba womntu. Iidonki ezingazichazanga zifuna iigloves ezingamanzi kunye nokuphefumla, ukubamba ngamandla kwesundu, iminwe eguquguqukayo kunye neigloves ezishushu kakhulu.
Iimpawu zeGloves Inqaku lokuFunda
I ingozi ye ukhwele ngaphandle unxibe iigloves zemoto?
Emva kokukhwela, ngaba ukhe waziva ubungqindilili, ukudinwa, okanye ubuthathaka ezandleni zakho? Ukuba impendulo yakho ngu-EWE, ngoko usenokuba uhlupheke ngenxa yokusetyenziswa kwezandla zakho kakhulu. Qaphela ukwenzakala okuqhelekileyo kwezemidlalo xa ukhwela ibhayisekile ngexesha. Ngapha koko, lohlengahlengiso lwentshukumo kunye nokusetyenziswa kwezixhobo kunokukunceda ukuba kude nokulimala.
Ukusuka kwindawo yokujonga ukuphepha, yinto enzima ukuthetha ngegloves zokuhamba ngebhayisikile. Iigloves ezikhwele iigloves ezikhethekileyo zokuhamba ngebhayisikile. Ngokweentlobo ezahlukeneyo zeebhayisikile, zinokwahlulwa zibe ziigloves zeebhayisekile zentaba, iiglavu zendlela yebhayisekile kunye neigloves zokuhla ezantsi. Iigloves eziyilelwe ngokukodwa imidlalo ezenziwa ziimpawu ezithile zineemfuno ezinjalo malunga nokukhuseleka emzimbeni kunye nentuthuzelo yokukhwela. Ngokwexesha lonyaka, kukho isiqingatha seminwe kunye neminwe epheleleyo. Amacandelo esundu ayqinile. Ngokwezikhundla ezahlukeneyo kunye nokuziqhelanisa, izixhobo ezisetyenziselwa iipads zesundu nazo zahlukile. Umzekelo, iipads zesundu zeebhayikhi zendlela zimxinekile kakhulu kuneglavu yeebhayisekile zentaba.
Ukuba izibambo zakho ziiphatho ezibambile, ngaphandle kweiglavu zengcali, uxinzelelo luhanjiswa ngokuthe ngqo kwi-Median nerve yesithupha esiphambili, umnwe wesalathiso, umnwe ophakathi kunye nenxalenye yomnwe wokukhala, ubangela ukuqina kwesandla, ukuqaqanjelwa ngumnwe kunye nobuthathaka, obuzonyango. ibizwa ngokuba yi-wrist Tunnel syndrome. Uxinzelelo lwexesha elide le-nerve ephakathi kunokubangela ukulahleka kokuziva kwesithupha, umnwe wesalathiso, kunye nomnwe ophakathi, i-atrophy yemisipha, kunye nentlungu yesibindi kwisandla esisebeza egxalabeni nasejoyini.
Iigloves ezinesithuthuthu zinokubonelela ngokukhuselwa xa uwe emotweni, kwaye zikhusele elangeni nasebandayo. Sukujongela phantsi iglavu encinci. Ukukhethwa kwezixhobo zale nxalenye kuya kwahluka ngokwamanqanaba ahlukeneyo esandla. Umzekelo, umva wesandla ngokufuthi senziwe ngezinto ezahlukeneyo ezinje ngokuphuma komoya, ukufota, ukufikelwa lilanga, kunye nokukhusela ukubanda La macandelo agxininisa imisebenzi ye-shockproof, anti-skid kunye nokungahambelani, uyilo lweigloves qaphela kwaye unikele ingqalelo.
Ukunxiba iigloves ngelixa ukhwele isithuthuthu kunceda ukwamkela ukubila, ukungagungqi, ukuphefumla, ukungcangcazela, ukukhusela amalungu esundu kunye nesiqwenga. Xa isithuthuthu sikwindawo ehamba ngesantya esiphezulu, imo yokulawula umkhweli kwisithuthuthu ixhomekeke kakhulu kwisandla, ngoko ke kubalulekile ukubayisa i-skid kunye ne-shockproof. Kuba umkhweli wamkela ukuhlala kunye nokubamba okungafaniyo nokuzonwabisa ngebhayisikile, oku kugcina isihlanganisi sihlangana kwindawo engaqhelekanga yexesha elide. Ixesha elingaphezulu, kunokubangela i-wrist nerve compression syndrome. Umsebenzi okhethekileyo wokukhwela iigloves ukunciphisa uxinzelelo kumdibaniso wesandla. Umsebenzi wokufunxwa kokukhwankqiswa kwesandla seglavu unokuwukhulula ngokukuko amandla okushukuma kwebhatyi ngexesha lenkqubo yokukhwela, kwaye kuthintelwe ukonakala kwemithambo yesundu, ngaloo ndlela kuncitshiswa ukukhathala kwesandla kunye nokwandisa ukhuseleko kwibhayisekili.
Edlulileyo: Inkxaso ye-Elbow
Okulandelayo: I-bamboo charcoal knee brace
I-Lace-up ye-ankle brace
Umnqamlezi wokulandela ngomnatha
Inkxaso yamadolo eSilicone
Isinqe kunye nethanga inkxaso